2378 पटक पढिएको
मेरो अनुहारतिर हेर्दे उनले भनिन्, ‘काका तपाईं पनि मलाई अरूले सोचेजस्तै सोच्नुहुन्छ हो ? 'उनका कुरा सुनेर म छांगाबाट खसेजस्तै भएँ । मेरो अनुहारमा छाएको मलिनता र निन्याउरोपन हेर्न लायककै थियो । हुन पनि हो जान्नेलाई काखा अनि हाइहाइ र नजान्नेलाई पाखा, हेँला, तिरस्कार त म विद्यालय पढ्दा नै पनि त हुन्थ्यो । नजान्नेलाई कसले पो गन्थ्यो र । के यो राम्रो कुरा हो र ? यसले बालबालिकाको मनमा पार्ने विकराल असरबारे अभिभावक र शिक्षकले सोच्न जरुरी छैन र ?